Thomas Tuchel oo sheegay sirta ka dambeysa guushii ay xalay ka gaareen kooxda Liverpool – Gool FM
(Champ’ League) 29 Nof 2018. Macalinka kooxda Paris Saint-Germain ee Thomas Tuchel ayaa ammaanay ciyaartoydiisa ka dib markii ay 2-1 ku garaaceen kooxda Liverpool wareegii shanaad heerka group-yada ee tartanka Champions League.
Paris Saint-Germain ayaa guul dahabi ah ka gaartay Liverpool kulankoodii ay cayaareen markay uga badiyeen 2-1, xili kooxda reer France ay guushan muhiim u ahayd.
Hadaba macalinka kooxda PSG Thomas Tuchel ayaa kulanka kadib la wadaagay saxaafada.
“Aad ayaan u faraxsanahay, sababtoo ah tani waxay ahayd fursadihii ugu dambeysay ee aan ku xaqiijineyno awooda aan u leenahay inaan wajihi karno koox weyn sida Liverpool oo kale”.
“Liverpool waa koox leh maskax weyn ee guuleed, balse ciyaartoyda kooxda Paris Saint-Germain ayaa xaqiijiyay in koox weyn ay la dagaalami karaan”.
“Waxaan gaarnay guushii aan u qalanay, laakiin guusha kulamadan oo kale ayaa lagu gaari karaa kaliya difaac adag, sidaas darteed waxaan ciyaaray qorshon difaaceed aad u adag”.
“Waan ku faraxsanahay jamaahiirta, sababtoo ah waxay arkeen inaan heysano qaab ciyaareed difaac adag ah, Joojinta halista ka imaan karta xidigaha Salah, Firmino iyo Mane, ma ahan shaqo fudud, balse ugu dambeyntii waan guuleesanay ciyaartoydana waxay bixiyeen qaab ciyaareed cajiib ah”.
Kooxaha Group C ee tartanka Champions League ayaa u kala sareeya sida tan:
– Napoli = 9 dhibcood.
– PSG = 8 dhibcood.
– Liverpool = 6 dhibcood.
– Red Star Belgrade = 4 dhibcood.
Thibaut Courtois oo doortay Saddexda goolhaaye ugu fiican aduunka